Khabiirka Kala Duwan: 10 Xaqiiqooyinka Badbaadada Cyber ​​Security
Qeybta amniga internetka ayaa sii kordhay khabiiro badan oo ku soo biiraya warshadaha.Sidaas daraadeed, software dheeraad ah oo badan oo xaasidnimo ah ayaa loo qorsheeyay oo ku dhowaad 230, 000 naceybka cusub ayaa la bilaabay maalin kasta.Waxaa lagu qiyaasay in 100 bilyan oo doolar loo maalgeliyo sanad walba si looga hortago dambiyada internetka.
Ilaa intaad internetka isticmaasho, waxaad u jilicsan tahay weerarrada internetka - best cctv analytics software. Kuwa soo socdafikradaha Nik Chaykovskiy, ee Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka Sare, wuxuu qeexayaa sida khatarta uu u yahay browserka si uu u shaqeeyo iyada oo aan la helin badbaado.
1. Weeraryahannada ugu khatarta badan caalamka oo dhan
FBI waxay leedahay liistada ugu badan ee la doonayay 19 dambiilayaasha internetka ee mas'uulka ka ahdadka isticmaala webka 'khasaare kala duwan $ 350,000 ilaa $ 100 million. Xilligan, maadooyinka JABBERZEUS ayaa ah kuwa ugu badan ee doonaya FBI.
2. Kharashka ugu badan ee fayraska kombiyuutarka ee taariikhda
MyDoom waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa ugu kharashka badan adduunka oo dhan taariikhda cyberamniga. Waxay ku dhowdahay in fayrasku uu ilaa iyo hadda soo gaadhay waxyeelo ah $ 38.5 bilyan.
3. Bartilmaameedka la doortay ee weerarrada warbaahinta bulshada
Ilaa hadda, waxaa jira in ka badan 1,6 bilyan oo macaamiisha warbaahinta bulshada caalamkabartilmaameedka la door-biday ee hacker. Isticmaalayaasha isticmaala wakhti muhiim ah oo ku saabsan shabakadaha bulshada waxay u badan tahay inay dhacaan weerarradaas.
4. 99% kombuyuutaradu waxay halis ugu jiraan inay isticmaalaan xirmooyinka
In ka badan 99% kombiyuutarada ayaa leh barnaamijyo sida Adobe Reader, Oracle Java, iyo AdobeFlash ku rakibay nidaamyadooda hawlgalka. Joogista software-yada ayaa qaabeynaya wadiiqo, kuwaas oo weeraryahannadu wax ka tarin karaan si ay u helaanqalabkaaga..
5. Dambiilayaasha Internetku waxay doorbidayaan habka wax ku yeelashada dhibbanayaasha
Dhibbanayaasha weerarka internetka si sahlan ayaa loo xakameyn karaa ilaa ay dadku sameeyaan xidhiidhka ugu liitaku saabsan ammaanka internetka. Sidan oo kale, injineernimada bulshada ayaa loola jeedaa habka loo hubiyo in shakhsiyaadka u sheegaan qarsoodi ahaan inay wax ka qabtaaniyaga nafsiyan ahaan.
6. Digniinta Amniga: Shaqooyinka gudaha
Xaaladaha badankood, qiyaastii 59 boqolkiiba shaqaalaha waxay xadayaan xogta urur markay yihiinwaa la eryi karaa ama marka ay is casileen. Dhibaatooyinka kale ee ka yimaada si loo helo badbaado waxaa ka mid ah kuwa xaasidnimada leh, kuwa aan caqli-gal ahayn iyo ka faa'iideystayaasha dadka.
7. Dawladdaada waxay kordhineysaa baylahnimadaada
Waa xaqiiqo ah in dawladaha caalamku ay qorsheynayaan nacasnimo ujeeddo lehisticmaalka sida hubka digital-ka ah. Xaqiiqadu waxay u arkaan qaabka ay u leedahay hay'ad gaar ah iyo kombiyuutarro shakhsiyadeed taasoo keentay koritaanka horumarineeddembiyada ciqaabeed.
8. Waxaa jira khariidad deg deg ah oo muujinaysa weerarrada ficilka
Mareykanka waa bartilmaameedka loogu talagalay dambiileyaasha internetka. Tusaale ahaan,Wasaarada Difaaca ee Wasaarada Gaashaandhiga ee Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ay kudhintay 100-milyan oo doolarka Mareykanka ah.
9. Cybercrime waa caqabad weyn oo adduunka ah
68% lacagta lumay ee ka dhalatay weerarrada Internetka ayaa loo arkaa mid aan la aqbali karin.Dambiyada Cyber-gu ma aha oo kaliya kharash badan, laakiin sidoo kale waxay keenaysaa caqabado kale oo shirkadaha caalamiga ah.
10. Hacktivism waa dareenka koowaad ee xayiraadda weerarrada internetka
Hacktivism waxay ka dhigantahay in ka badan 50 boqolkiiba dhammaan weerarrada internetka ee caalamka. Ereygan waaoo matalaya codsiyada mucaaradka ee kombiyuutarada iyadoo ujeedadu tahay horumarinta qorshe siyaasadeed.
Marwalba xusuusnow, inaadan hoos u dhigin dambiilayaasha internetka. Sidaas darteed ma jirto badbaadowaa in wax-ku-ool ah, cabsigelin maaha mid aad u yar. Iyadoo aan loo eegin xajmiga hanjabaadda ammaanka internetka, waa in la qaadaa tallaabooyin habboonsi looga hortago wixii weerar ah ee aad la kulmi karto.